14. Central business register inquiry revised report 2015
15. FinScope consumer survey Zimbabwe 2011
16. 2014 child labour report
17. Zimbabwe population census, 2012
18. 2014 labour force survey.
19. Zimbabwe population census, 2012. National report.
20. Zimbabwe 2012 : population census results : national.
21. 2011 child labour survey report
23. Zimbabwe national occupational safety and health policy.
24. National youth policy of Zimbabwe
25. The food and nutrition security policy for Zimbabwe : promoting food and nutrition security in Zimbabwe in the context of economic growth and development.